I-Vila de Ponte Guest House - I-Airbnb
I-Vila de Ponte Guest House
Ikamelo e-i-guesthouse ibungazwe ngu-Diana Filipa
U-Diana Filipa Ungumbungazi ovelele
Sitholakala kwenye yezitaladi ezaziwa kakhulu nezomlando e-Ponte de Lima.
Isevisi yethu yamakhasimende igxile ekukunikezeni indawo ekhethekile ukuze ujabulele ukuhlala kwakho e-Ponte de Lima ngesitayela nokunethezeka. Ungafaka Isidlo sasekuseni ekuhlaleni kwakho ngo-5€ kuya ku-6 €/umuntu. Isidlo sasekuseni sinikezwa nsuku zonke kusetshenziswa izithako zendawo ezintsha, ongazijabulela ekamelweni lesidlo sasekuseni, ekamelweni lakho lokulala noma kuvulandi.
Singosomabhizinisi abasebasha ababili abavela e-Ponte de Lima. Njengoba sesikhulile kuleli dolobha elibukekayo, singakusiza ukuthi uchithe isikhathi sakho esiningi lapha futhi ubone konke okunikezwa yindawo yangakini.
Sahlala e-UK iminyaka engu-7 futhi sasithanda ukuhamba, kodwa izinhliziyo zethu zahlala njalo e-Portugal. Lapho indodana yethu izalwa sinquma ukuthi sekuyisikhathi sokubuyela ekhaya kulokho esikubheka njengedolobhana elihle kunawo wonke emhlabeni.
I-Vila de Ponte Guest House yasungulwa ukuze isisize sabelane ngezindaba zelinye lamadolobhana amadala kunawo wonke ezweni, futhi sinikeze abantu ukumelela kwangempela i-Ponte de Lima.
Ibungazwe ngu-Diana Filipa
UDiana Filipa Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: 88717/AL